Umrepha uthengele umama wakhe imoto | isiZulu
Umrepha uthengele umama wakhe imoto
UDlubheke ukhala ngokucindezelwa abasakazi boKhozi FM
IZITHOMBE: Umculi eziqeqesha neBarcelona
Kugcine kumnqobile ukugula umculi wowokholo - Umbiko
Johannesburg - Omunye wabaculi bakuleli weHip hop, uGigi Lamayne, usefake enkundleni yezokuxhumana, i-Instagram, isithombe semoto asanda kuyithengela umama wakhe kanti ngokwakhe uthi “lokhu kuseyisiqalo nje”.
OLUNYE UDABA: Sigxekwe kabi isenzo somsakazi woKhozi ehlambalaza umculi
“Ukuba ngumama ongayedwana kwakunzima, ngiyazi…sekube yizinyanga ezimbalwa selokhu ngakutholela yona futhi sengivele ngizama ukufaka ama-rims amasha kuyona endaweni yokwakha,” kusho lo mrepha, engeza ngokuthi uzoqinisekisa ukuthi umama wakhe ukuthola konke.
“Ukuqina kwakho kukhona konke osudlule kukhona kuyakhuthaza. Ngicabanga ukuthi ufanelwe yisiphetho esiyinjabulo ngaso sonke isikhathi. Ngizozincisha mina ukuqinisekisa ukuthi unakho konke.”
Funda umyalezo ophelele kaGigi Lamayne ngezansi:
A photo posted by Gigi LaMayne (@gigi_lamayne) on Jan 24, 2017 at 2:34am PST